Ikhaya ngombono! - I-Airbnb
Igumbi lakho lokulala e indlu sinombuki zindwendwe onguRobin
Unokufikelela ngokupheleleyo kumgangatho ophantsi ozolileyo wekhaya. Ukufikelela kwabucala kunye neendawo zokupaka. imizuzu ukuya kwindlela 272, 222 kunye 322. Yabucala cul-de-sac kwidolophu ezolileyo Akron. Hamba okanye ukhwele ibhayisekile yakho ibhlokhi enye kwaye ukwindawo entle yeRAIL-TRAIL enokufikelela ngokulula e-Ephrata, eAkron naseLititz!
https://www.traillink.com/trail/warwick-to-eprata-rail-trail/ FYI Ndibiza i-$3 ngobusuku ukuba uzisa isilwanyana sakho sasekhaya undazise.
Umgangatho ongezantsi unegumbi lokulala elingu-I (ibhedi yamawele), igumbi lokuhlambela, igumbi lokuhlala, indawo yokuhlala enetafile, imicrowave kunye nembiza yekofu. Ukufikelela kwifriji kwigumbi loncedo. Igumbi lokuhlala linebhedi kunye ne-recliner kunye ne-smart TV. NgeCable kunye neNetflix. Umatrasi womoya omnye
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, 1 iisofa eziyi-, umatrasi ompontshwayo oyi- 1
4.92 · Izimvo eziyi-139
Iikhilomitha ezi-2 ukuya eDowntown Ephrata Cloisters, iikhilomitha ezisi-7 ukuya eLititz (eyeyona dolophu ipholileyo incinci eMelika) kunye neekhilomitha ezili-13 ukuya kwisixeko saseLancaster, iikhilomitha ezili-11 ukuya kwi-Intercourse, ilizwe lama-Amish kodwa iintsapho zamahashe kunye neenqwelo zibonwa rhoqo kuzo zonke ezi dolophu! Ukusuka kwiveranda, unokuphumla kwaye ujabulele umbono. Ibhloko enye ukuya kumzila kaloliwe!
Siya kukuhlonipha ubumfihlo bakho kodwa siya kufumaneka kuyo nayiphi na imibuzo onokuba nayo.